Komishanka oo u digay dadka doonaya inay kaadhka codbixinta qaataan laba jeer | Araweelo News Network
Komishanka oo u digay dadka doonaya inay kaadhka codbixinta qaataan laba jeer
Hargeysa(ANN)Komishanka Doorashooyimka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa shaaciyey tirada dad isku dayey inay qaataan kaadhka diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka ee haatan ka socday gobollada Saaxil, Gabiley iyo Hawd wax ka badan hal mar, dadkaas oo dhammaantood la qabtay, isla markaana mudataystay xadhig iyo ganaax.
Sidaana waxa ku dhawaaqday marwo Kaltuun Sheekh Xasan Cabdi Madar oo ka tirsan xubnaha Komishanka Doorashooyinka oo saxaafadda kula hadashay magaalada Berbera shalay, iyadoo u digtay muwaaddiniinta doonaya inay is diiwaangelinyaan laba goor, arrintaasoo ay xustay in aanay u suurtogeli doonin, maadaama ay haystaan qalab casri ah oo markiiba qabanaya qofka ku noqnoqda.
“Ilaa hadda waxa la hayaa 134 qof oo ah dadka ku noqnoqday diiwaangelinta codbixiyeyaasha, markaa 134-kaas qof waxay ka go’an yihiin Gobolka Saaxil, waana laga reebayaa, codkoodiinna wuu ka lumay, waxayna muteen xadhig, ganaaxna way mudanayaan, markaa waxa aannu u sheegaynaa inta dambe in aanay isku dayin inay is-diiwaangeliyaan wax ka badan mar qudha, codkoodana aanay ka lumin gobolka, iyaguna iska lumin oo aanay ku daalin wax aan suurtogal ahayn,” ayey tidhi marwo Kaltuun Sheekh.
Waxa ay intaas ku dartay, “Dadka ugu badan ee la qabtay waa dadka laga soo qaadayo Burco ee beenta loo sheegayo, iyadoo codkoodiinna ka lumay. Waxa kaloo jira dad doonaya inay ku celceliyaan oo intay goob ka qaateen, haddana isku deyaya inay goob kale ka qaataan, taasna waa laga tirtiray, codkoodiina ma helayaan, markaa waxa aan leenahay dadku yaanay ku dawakhin inay iska lumiyaan codkooda, qofku hal cod ayuu xaq u leeyahay, waana inuu halkiisaa cod isku diiwaangeliyo si aannu hadhaw uga khasaarin.”
Marwo Kaltuun ayaa sidoo kale ka hadashay bilawga wejiga labaad ee diwaangelinta Gobolka Saaxil iyo goobaha loogu talogalay in diiwaangelintu ka sii socoto, iyadoo ku baaqday in dadweynuhu ka faa’iidaystaan diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka Somaliland.
“Waxa sii shaqayn doona toban goobood oo ku yaal gudaha magaalada Berbera muddo toddoba maalmood ah, iyadoo marka muddada rasmiga ah dhammaatana (ilaa 28 bishan) tobanka goobood laga reebi doono saddex goobood oo sii shaqayn doona muddo 14 maalmood ah. Magaalada Sheekh oo wejiga labaad ka bilaabmay shalay (maalintii Jimcaha) waxa ay ka sii socon doontaa muddo toddoba maalmood ah, waxana ku xigi doona magaalada Go’da Weyn. Waxa kaloo jira goobo kale oo badan oo loogu talogalay in diwaangelintu ka sii socoto, waxaanna ka mid ah Bullo-xaar oo wejiga labaad ka bilaabmay shalay, waxana jiri doona goobo wareegi doona oo diwaangelinta loogu talogalay,” ayey tidhi.
Diiwaangelinta codbixiyeyaasha oo ka bilaabantay degaannada Gobolka Saaxil, 12 March 2016, waxa u dhammaaday wejigii koowaad oo socday muddo toddoba maalmood ah, halka wejiga labaad oo socon doonaa ilaa 28-ka bishan, iyadoo sidoo kale ay jiri doonaan goobo loogu talogalay in diiwaangelintu ka sii socoto muddo 21 maalmood ah oo ka bilaabmay shalay.